Caluula - Wikipedia
Magaalo in Bari, SomaliaTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Bari, Somalia
Muuqaalka magaalada 1920.
• [Duqa magaalada]
Shire Abdi ismail Goonyacade
Caluula ( , )waa degmo ku taala gobolka Bari, waxey u dhawdahay Raas Caseyr.
Xilligii gumeeysiga Talyaaniga Degmada Caluula waxay ahayd degmada ugu horaysa Dhinacyada siyaasada , dhaqaalaha , waxbarashada , caafimaadka iyo horumarka , waxaan tusaale u soo qaadankarnaa dhinaca siyaasada inay ahayd magaaladii ugu horeysay oo lagu kala saxiixday heshiiskii dhexmaray boqortooyadii Majeerneeniya iyo Talyaaniga taariikhdu markay ahayd 1903
Qunsulkii ugu horeeyey oo Talyaaniga usoo magacaabo Boqortooyada majeerteeniya waxaa xarun ahayd Caluula . Sidoo kale 1927 Caluula waxay naqotay Caasumada Majeerteeniya halkaas oo looga arimin jiray dhammaan gobolada Majeerteeniya sidoo kale waxaa uu heshiis kula galay talyaanigu qabiilada siwooqroon isla degmadaas .Waxaa kaloo jirtay inay ahayd meeshii ugu weyneed ee uu ka jiray dhaqdhaqaaqii xoriyad doonka (SYL) marka laga reebo Muqdisho . Dhinaca horumarka sida aad aragtaan dhismayaasha dhaardheer ee Talyaanigu ka dhisay Magaalada Caluula waxay markhati u tahay horumarkii ka jiray mandiqadaas iyo sida uu talyaanigu u daneynayey . Marka laga eego xaga waxbarashada sanadku markuu ahaa 1956 gobolka Majeerteeniya waxaa ka furnaa 18 iskuul oo sagaal kamid ihi oo ay ku oolaayeyn degmada Caluula Rag badan oo wax ku bartna ay noqdeeyn siyaasigiin iyo dhakhaatiir caan ah . Ilaha dhaqaalle ee degmadu leedahay
Degmadu waxay leedahay ila dhaqaale oo muhiim ah hadii lahorumariyo waxaana kamid ah :
kalluunka noocyadiisa kala duwan ayada oo degmadu ka mid tahay shanta deegaan (Zone ) ee ugu kalluunka badan uguna taya fiican caalamka sababo juquraafi oogeeyd .
80% luubaanta Soomaaliya laga dhoofiyo waxay ka timaadaa degmada Caluula waana tan ugu fiican .
timirta kabaxda magaalooyinka geesalay , seyn weyn , seyn yar , murcanyo iyo xaabo waxay ku filantahay dadka reer Puntland oo dhan haday hesho horumarin tayeysan .
xoolaha nool oo ay kamid yihiin ariga iyo geela waa 20% dhaqaalaha degmada
dhuxul dhagaxda kujirta agagaarka magaalada Dhurbood oo ah dhul dhan ilaa kun mitir waxaa dhex jiifa dhuxul dhaqax . dhuxushaa waxaa dibada u dhoofin jiray Talyaaniga xilligii kumaysiga hada waa mid looga faaiidaysan karo isticmaalka dalka .Iyadoo looga kaaftoomi karo adeegsiga dhuxusha dhirta iyo xaalufka dalka hadii loo helo shirkado soo saara .
milixda ama cusbada jaanka caluule waxay noqon kartaa kamiyad suuqyada looga baahanyahay loo dhoofin karo hadii lahormariyo . Xaaladu si kastaba ha ahaateey xilligii kacaanka wixii ka dambeeyey gaar ahaan xilligii burbur ka horumarka degmadu waxay ahayd mid gaabis ah . Maamuladadii kala dambeeyeyna xil iskama saarin wax qabadkeeda marka laga reebo Muddane Cade Muuse oo qaab libaax ka qaatay furitaanka waddada lafa- gorey oo hada furantay.
Degmooyinka Gobolka Bari
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Caluula&oldid=161821"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2016, marka ee eheed 06:14.